खबर मलाई, Author at खबर मलाई - Page2of 131
७ भाद्र २०७६, शनिबार ७ भाद्र २०७६, शनिबार खबर मलाईLeaveaComment on गर्मीमा यी खानेकुरा नखाँदा राम्रो
काठमाडौं- गर्मीमा के खानुपर्छ र के खानु हुँदैन भन्ने विषयका बारेमा जान्नु आवश्यक हुन्छ । यहाँ हामीहरू त्यस्ता खानेकुराको चर्चा गर्दैछौं जसलाई गर्मीमा नखाएकै राम्रो । अदुवा अदुवाले शरीरलाई प्राकृतिक रूपमा तातो राख्छ । यसको नियमित सेवन गर्दा शरीरको तापक्रम बढ्छ । अदुवा स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ तर गर्मीमा अदुवा हदभन्दा बढी खाएमा हानि पुग्छ […]
मानिसमा हाँसोका फाइदैफाईदा !
६ भाद्र २०७६, शुक्रबार ६ भाद्र २०७६, शुक्रबार खबर मलाईLeaveaComment on मानिसमा हाँसोका फाइदैफाईदा !
एजेन्सी – हाँसोले मानिसलाई शारीरिक तथा मानसिक रुपमा स्वस्थ बनाउँछ। यस्ता छन् हाँसोको फाईदा : सम्पूर्ण शरीरलाई आराम दिलाउँछ प्रतिरोधी क्षमतामा वृद्धि गर्छ स्वस्थ रहने रसायन बढाउँछ मुटुको रक्षा गर्छ क्यालोरी खपत हुन्छ मूड ठीक गर्छ आयु बढाउँछ बौद्धिक स्तर बढाउँछ
६ भाद्र २०७६, शुक्रबार ६ भाद्र २०७६, शुक्रबार खबर मलाईLeaveaComment on क्यान्सरको संकेत कानको संक्रमण हुनसक्छ, यसरी थाहा पाउनुस्
कानमा दुईथरी क्यान्सर हुन्छ : क्लोस्टीटोमा र स्कावमस सेल सार्किनोमा । यी दुवै क्यान्सर कानभित्र हुन्छन् । त्यहीँबाट यिनीहरू पूरै शरीरमा फैलिन्छन् । सही समयमा यसका संकेतहरूलाई चिनेर उपचार गरेमा यो खतरालाई टार्न सकिन्छ । कानबाट पानीजस्तो तरल पदार्थ वा रगत निस्केमा । कानको जाली क्षतिग्रस्त भएमा । कानमा संक्रमण भएमा । श्रवणशक्ति गुमेमा । […]
सामान्यतया सबै खाले रोगव्याधबाट जोगिन चिकित्सकदेखि घरपरिवारका ठूलाबडाले हात सफा राख्ने सल्लाह दिन्छन्। सबै भन्छन्, ‘हात सफा राख। दिसा–पिसाब गरेपछि साबुनले हात धोऊ, खाना खानुअघि हात धोऊ।’ भनिन्छ हात सफा भए कीटाणू फैलिँदैनन्। खानेकुरा बेच्नेहरूले अझ बढी हात सफा राख्नुपर्छ। तर, यथार्थमा हुन्छ के भने हामीले जतिसुकै प्रयास गरे पनि हातबाट ब्याक्टेरिया÷कीटाणू पूर्णतया समाप्त हुँदैनन् […]
६ भाद्र २०७६, शुक्रबार ६ भाद्र २०७६, शुक्रबार खबर मलाईLeaveaComment on गर्ने होइन त योग ? यी हुन् योगका फाइदाहरु
काठमाडौँ । रोग लाग्नै नदिन के गर्नु पर्ला ? सही खानपान, आराम तथा सन्तुलित र स्वस्थ जीवनशैलीले हामीलाई चुस्त राख्ने गर्दछ । हिजोआज सबै उमेर समूह तथा वर्गका मानिसहरुले स्वस्थ रहन विभिन्न उपायहरु अपनाउने गरेका छन् । हुन त रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु श्रेयष्कर हो । त्यसका लागि योग सबैको निम्ती सहयोगी […]
६ भाद्र २०७६, शुक्रबार ६ भाद्र २०७६, शुक्रबार खबर मलाईLeaveaComment on सम्बन्ध टुट्याे ? भावुक भएर रुनुस् ताैल घट्नेछ
काठमाडाैँ । मानिसले जीवनभरमा कति आँसु झार्छ होला ? अनुसन्धानकर्ताहरु भन्छन्, एक व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा १६.५ ग्यालोन आँसु झार्ने गर्छ । तर, कहिलेकाँही मानिसहरु आफ्नो भावनालाई दबाउन खोज्छन्, आफ्नो पीडाहरु बाँड्न पनि चाहदैनन् । कसैलाई सम्झेर रुनुले तपाईको अनावश्यक तौल घट्छ भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ ? तर पछिल्लो अध्ययनको तथ्य यही हो । यदि त्यसो […]
काठमाडाैँ । रिस वा क्रोध वास्तविक वा काल्पनिक जीवनको संघर्ष वा दुःखको निम्ति प्रतिक्रिया हो । यसको उत्पति थलो विगत वा वर्तमानका अनुभवसँग गाँसिएको हुनसक्छ भन यो भविष्यको स्वप्निल योजनासँग पनि जोडिएको हुन सक्छ । सामान्यतया रिसराग भनेको डरको अवधारणाले विकास भएको अवस्था पनि हो । जब केही सोचेको लक्ष्य वा कार्य पूर्ण हुँदैन तब […]
६ भाद्र २०७६, शुक्रबार ६ भाद्र २०७६, शुक्रबार खबर मलाईLeaveaComment on सुगर नियन्त्रण गर्न हरियो खुर्सानी
खानाको स्वाद बढाउन हरियो खुर्सानी प्रयोग गर्ने गरिन्छ । भिटामिन ए, बी–६, आइरन, पोटासियम, प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेड प्रशस्त मात्रामा पाइने हरियो खुर्सानी अब स्वादको लागि मात्र नभई स्वास्थ्यका लागि पनि महत्वपूर्ण गुणले भरिपूर्ण रहेको एक अनुसन्धानले देखाएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी अनेक समस्या समाधानमा भूमिका खेल्ने हरियो खुर्सानीले डाइबेटिजबाट पीडित मानिसलाई अहम् लाभ पुऱ्याउने अनुसन्धानकर्ताहरूले दाबी […]
रोग किन लाग्छ ? यसको सोझो जवाफ हो, हाम्रो आफ्नै कमजोरीले । अर्थात खानपान, दिनचर्या आदिमा गरिने गडबडी ।हामी दिनदिनै रोगी हुँदैछौं । रोगी कसको कारणले हुँदैछौ ? जवाफ हो, आफ्नै कारणले । खासगरी हाम्रो यस्ता आनीबानी, जसले रोगी बनाउँछ । बाह्य खासगरी वातवरणिय कारणले पनि हामीलाई कमजोर बनाउँछ । कतिपय अवस्थामा बंशानुगत कारण हामी […]
६ भाद्र २०७६, शुक्रबार ६ भाद्र २०७६, शुक्रबार खबर मलाईLeaveaComment on बिरामीलाई किन राखिन्छ आईसीयूमा? कतिबेला निकालिन्छ?
आईसीयूको पूरा नाम इन्टेन्सिभ केयर युनिट अर्थात् सघन उपचार कक्ष हो, यस वार्डमा गम्भीर खालका बिरामीलाई राखिन्छ । यससँग सम्बन्धित विज्ञानलाई क्रिटिकल केयर मेडिसिन भनिन्छ। रक्तचाप कम भएर औषधि प्रयोग गनुपर्ने, मुटुको रोगी, निमोनिया भएर भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्थालगायत सिकिस्त बिरामीलाई आइसियूमा राख्ने गरिन्छ । नियमित रूपमा चिकित्सकको निगरानीमा राख्नुपर्ने बिरामीलाई आइसियूको आवश्यकता पर्छ ।कस्तो अवस्थामा राखिन्छ? आजको नयाँ […]